အချက်၆ ချက်နဲ့ စစ်ပါ
(၁)ကိုယ့်ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အသုံးချပါ။
သတင်းမှားတွေရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်က လူတွေကို မှင်သက်စေတဲ့ ရလာဒ်တွေ လိုချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် အရမ်းထူးဆန်းပြီး ဒေါသထွက်စရာ ဒါမှမဟုတ် ကြောက်စရာ ခံစားမှုမျိုးရအောင် လုပ်ဆောင်တက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းမှားတွေကို ကိုယ်ပိုင် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အရင်ကြည့်ရှုဆုံးဖြတ်ပါ။
(၂) သတင်းရင်းမြစ်ကို ဆန်းစစ်ပါ။
သတင်းရင်းမြစ်က ဘယ်တုန်းကမှ မကြားဖူး တဲ့အရင်းအမြစ်နာမည်တွေ ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ သေချာ ဆန်းစစ်ပါ။
တချို့ သတင်းအမှားဖြန့်သူတွေက မကြားဖူးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ သတင်းဌာန နာမည်ခံတွေ ဖန်တီးတက်ကြပါတယ်။
(၃) ဘယ်သူက သတင်းကိုရေးသားတာလဲ?
သတင်းတစ်ပုဒ်ကို မြင်ရင် ဒီသတင်းကို တခြားသတင်းဌာနတွေက ဘယ်လိုရေးသားတာလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပါ။
တစ်ဉီးတစ်ယောက်တည်း ရေးသားတာမျိုးကို မယုံကြည်ပါနဲ့ ။
(၄) သတင်းမှာ ဘယ်သူတွေကို မေးမြန်းဖော်ပြထားလဲ?
ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေက သတင်းထဲမှာ အချက်အလက်စုံ၊ အင်တာဗျူး အမေးအဖြေအစုံကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မျက်မြင်သက်သေ တွေကိုပါ စုံလင်စွာ ထည့်သွင်းထားတာပါ။
သတင်းမှားတွေက ပုံအတုတွေ၊ သတင်းရင်းမြစ်မသေချာတာတွေ နဲ့ ဖော်ပြတက်လေ့ရှိပါတယ်။
(၅) မှန်သလားဆိုတာ အမြဲဆန်းစစ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် သတင်းအမှားတွေက စာဖတ်သူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ပဲလိုချင်ကြပြီး အကြောက်တရားတွေ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
(၆) သတင်းဓာတ်ပုံတွေကလည်း အဓိကကျပါတယ်။
သတင်းအမှားတင်တဲ့သူတွေက နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့သတင်းတွေ ကို စာဖတ်သူတွေ ယုံကြည်အောင် သတင်းဓာတ်ပုံအမှားတွေ လှိုင်လှိုင်သုံးပြီး ဖော်ပြလာ ကြပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို ဆန်းစစ်ဖို့ အတွက် Google Reverse Image Search ကနေလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။